Uhlu Lwezakhiwo: » Isiqondisi Sabathengisi Bezezakhiwo » Abathengisi Bezakhiwo » CA » Quebec » Montreal » I-ejensi Yezezindlu Nezindlu 1
Iwebhusayithi :: www.landmark-canada.com
Ikhodi ye-ZIP:: I-H9R 5M9
Ukuthenga ikhaya kungenye yezikhathi ezifezekisa kakhulu umuntu ofuna isiqiniseko nokuqina kulokho okungaba ngumhlaba omatasa. Lokhu kutshalwa kwezimali okuphambili kuyisiqalo seminyaka yokusebenza kanzima, futhi kuholela umuntu esahlukweni esisha ngokuphelele empilweni yabo.
Ochwepheshe beReal Real Estate nezezimali obanjelwe kwiLandmark Group bayakuqonda lokhu, futhi sikwenza umthwalo wemfanelo wethu wokunciphisa inqubo yamakhasimende ethu okuthenga ekhaya. Asitholakali kuphela ngaphandle kwamahora ajwayelekile asebhange, kepha singeza ukuthinta okuhlukile kumasevisi anikezwayo.
Sinikeza amasevisi alandelayo:
• Ukuthenga kwakho kokuqala ekhaya
• Ulayini Wekhaya Wokulingana wesikweletu
• Ukutshala indawo yokuhlala
• Ukuphinda ubambise izindlu kabusha
• Imalimboleko yokuhweba
• Imali yesibili
• Imalimboleko yokuzisebenzela
• Imali mboleko yomnikazi webhizinisi elincane
• Ukuhlanganiswa kwezikweletu (izikweletu)
• Enye imali
(514) 316-xxxx Bonisa
Ibhaliswe ku-27. I-Dec 2017
Xhumana nomkhangisi (514) 316-xxxx
Ibhaliswe ngo-December 27, 2017